12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED tape licht,Led Light Strip,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - Shina 12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED tape licht, Manufacturer & Supplier
12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED tape licht. Isika manana ny tranokala lehibe indrindra ny latsa-pitenenana ambany sy ny lanjan'ny LED ho an'ny lampihazo ho an'ny indostrialy sy ivelan'ny labozia ivelany. Nisy olona iray mitondra ny anarana hoe neon flex light na nitondra hazavana mafy, nitarika neon flex. Manana karazan-tsoratry ny CE rehetra isika eo amin'ny toetry ny kelvin faniriana rehetra ary koa ny karazan-tsavona maro samihafa hisafidianana. Ampiasao ny lanjan-tsarimihetsika avo lenta ho an'ny faritra anatiny sy ivelany, izay ahitana ny fanazavana maharitra, ny eco-friendly and customizable linear. Ny horonan-tsarimihetsiketsiky ny Ribbon Star Star rehetra dia notsapaina tamin'ny tanana, nomena 50.000 ora mandritra ny androm-piainana ary nahazo fiantohana 2 taona. Jereo ny fisafidianana RGB voalohany, ary ny loko samirery etsy ambany, na hanome antsika antso amin'ny fanontaniana izay tsy maintsy hamaritana hoe iza no maivana amin'ny hazavana LED anao. Ny fampitomboana maivana sy ny SMD dia ahafahan'ny LED hazavana manjelatra ampiasaina amin'ny fampiharana toy ny fanamafisana ny famolavolana tara-pahazavana, fluorescent ary halogen fanoloana fanafanana fantsona, fampihetseham-pandrefesana indirect, fanaraha-maso Ultra Violet mandritra ny famolavolana ny famolavolana, ny fametrahana sy ny endriky ny akanjo, ary na dia ny fambolena.( 12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED tape licht )
12V DC 110 / 240V AC LED neon flex light LED tape licht